I-Midesaven yilapho uza kufumana iimpumelelo zakho zokuphila. Yona yintloko yetshathi, apho ufikelela khona kwiindawo eziphakamileyo, nendlela oyaziwayo ngayo, njengelifa lakho.
Xa ukhangele kwireyati yokuzalwa, iMveli, eyaziwa ngokuba yiMedium Coeli (MC) .isignali yeSowdiac kwi-10 House cusp. Imele iimfuno zakho eziphezulu!
Ukufunda ngeMihlaba yakho, kwaye ujolise kuyo, unokuvuselela ingqondo elahlekileyo yenjongo.
Fumana iMidiya yakho ngokuchonga uphawu lweZodiac kwi- 10 House House cusp yeshadi lakho lokuzalwa .
Unyukela emisebenzini emitsha ezininzi kwizihlandlo ebomini, kunye nokuqala kwamanga okushiyekileyo. Oku kukunika umda kwi-atmospheric yamanje (kunye nesidingo sokutshintsha imisebenzi), kunye nokuzimisela ukuqhubela phambili kwiindawo ezintsha. Isidingo sokuba ngumphathi sivula umnyango wokwenza umsebenzi. Wena ungumholi onamandla, nokuba isiteji, emkhosini, kwimidlalo, kwishishini, kumthetho, kwezopolitiko. Ukuncintisana ngokwemvelo (kunye nokuxhatshazwa) yoluntu jikelele kukuzisa impumelelo kwinkalo yokulwa kuyo nayiphi na intsimi oyikhethayo. Awunesabi ukuthabatha ingozi, kwaye oku kukubeka eceleni. Uthanda ukuba ngumzila we-trailblazer, kwaye unokuba ngumzekelo kulezi zihlandlo ngokukhupha okukhulu kwixesha elizayo.
Unqwenela ukungena kwi-career ekhuselekile, enezandla ezithembekileyo zokuvelisa ubutyebi. Unomsebenzi wokuhamba komhlaba, ukwakha, ukulolonga iintlobo zobomi bomsebenzi - ukutyhila, ukulungiswa komhlaba, ukulima, izakhiwo, izakhiwo, izixhobo zokulima kunye nokulima.
Le ntshukumo eyenziwa yiVenus ikukhokelela ekudaleni ubuhle. Ukhanya xa izakhono zendalo zifumana iteksi kwimiboniso yobugcisa, ukuhlobisa, ukulungiswa kwekhaya, ubugcisa bokusebenza, umculo kunye nemisebenzi yezandla. Uyakwazi ukubona apho amathuba angaboshishino, kwaye wenze uninzi lwawo, nokuba ngumdlali wehlabathi wezezimali okanye utyalomali.
Unqwenela ukukhupha umnatha okhulayo wengqondo, ubambe yonke inkcazelo onokuyenza, kwaye uyibeke kwiifomu ezintsha. Oku kukunika izipho kwimimandla enjenge-journalism, ukusebenza, ukufundisa, ukubhala, ubuGcisa, ukuyila kunye nefashoni. Isipho sakho se-gab sinceda ukuba uzuze ngokuthengisa, ishishini, ubudlelwane boluntu, ukuthengiswa, nokuba 'ngumkhulumeli.' Uyonwabela umsebenzi obeka phakathi kweengxabano, utshintsho, uvuyo kunye nexesha elikhawulezayo leengcamango.
Ungumgcini wezingcingo ezibonakala zihlukileyo, eziyingxenye yonke. Oku kwenza ukuba ube yimpahla ebantwini, njengombonisi, umbonisi, umhumushi kunye nomsasazo. Uhlobo lwenu lwengqondo olumanzi lunokuba luncedo lokujonga amehlo. Oku kukunika indima ebalulekileyo, njengomthunywa weenguqu ekucingeni.
Udibana noluntu olunembile, olunokhathalelayo, nolwazi lokufunda imeko kwiqondo eliphantsi. Ezinye iinkalo ezinokuthi zingabantwana, ukuphulukisa unyango, ukunakekelwa kwezingane kunye nemfundo, iinkonzo zengqondo kunye nenkxaso yoluntu. Ukukwazi kwakho ukuhlakulela iimvakalelo zomzwelo kukukwenza kakuhle ekuthonyeni abanye, kwintlalo karhulumente, okanye kwiindawo zokurhweba ezifana nokuthengisa, ukuthengisa. Uyathembeka kwaye uyakuthanda, kwaye oku kukukunceda ukuba wenze iibhola zenkxaso ekuncedayo kumsebenzi wakho ngokusebenzisa ilizwi lomlomo.
Unokufumana ukucebisa abanye inxaxheba yemvelo. Izipho zakho ezicingayo zifumana ishaneli kwezobugcisa, kwaye unokwenza igama njengomguquleli womzwelo womntu ngomsebenzi wakho.
Izulu e Leo
Unobungqina obusayo obusebenza kakuhle kwiinkalo ezininzi, kubandakanya urhulumente, ukufundisa, ukwenza, ukuthengisa, ukulawula. Uzisa umbala kwisitayela sakho sobuholi, kwaye unokuba ne talente yokudala, nayo. Ubuntu obuninzi-ophezulu obukhanyisa kwigumbi kwenza kube lula kuwe ukwenza udibaniso olufanelekileyo. Ungonwabela imisebenzi emnandi njengomtshato okanye ukucwangciswa kwamalungu, ukuthumela ngaphandle-ukuthumela ngaphandle, kuba ngumphathi omkhulu kwenkampani yakho. Uya kuvuya ukuhlakulela isitala esidlangalaleni, kwaye unqwenela ukubonakala. Uyakwazi ukuthandwa ngabantu basekuhlaleni, kunye nenqanaba elibanzi lempembelelo. Uyazama ukuba "kwi-Who's Who" kwaye ungakhathazeki ukulahla amagama ukuze ufike phambili.
I-Flash, i-dynamism, ukufudumala, ukupha-zonke ezi zinto zikwenza ukuba ushiye ingqiqo ehlala njalo.
Unqwenela ukuba nesimiso esifanelekileyo emsebenzini, kwaye ubhaptizwe kwiintlobo zemisebenzi ecacileyo. Ingqondo ehlalutya yenza ukuba uphando olupheleleyo, umbhali, utitshala, ithala leencwadi, umqeshwa karhulumente okanye umqokeleli weenkcukacha. Awunakucingi ngokukodwa, kwaye unokutsalwa kwiindawo ezithile zesayensi okanye amayeza. Abo banomtsalane womhlaba bathandana nothando lwesigqi semihla ngemihla yokulima, ukuphilisa, unyango oluthile . Ukwenza uphawu lwakho njengomntu osebenza nzima kwaye unentembeko ephakamileyo, kunye nomoya wokusebenza kunye nenkonzo. Umsebenzi wakho unokubandakanya ukuphulukisa umhlaba, ukuhlambulula umzimba wokungaxhamli, ukufundisa abanye ngokuxhomekeka kweenkqubo. Unokufumana ukuzaliseka kwimihlaba yezempilo, iincwadi, ukudala indawo yokuphilisa njengama-spas, izitolo zokutya zezempilo okanye ama-yoga.
Unomntu ohlambulukileyo, onoluntu olwenza uluntu oluvumela ukuba wenze uxhulumaniso olufanelekileyo. Uphanga umfanekiso wokulungelelanisa nokuguquguquka. Isimo sengqondo esifanelekileyo siyakuvumela ukuba uhambe kunye nokuhamba kwaye uhlengahlengise indlela yakho yokusebenza njengamaxesha atshintsha. Iliso lakho kwizinto ezikulo hlobo liguqulela kakuhle ukubonisana nomfanekiso, ukuhlobisa, ubugcisa, imidiya yokuzonwabisa. Kodwa unokwenzeka nje ukuba uhambe kwimisebenzi yengqondo, njengomthetho, ezopolitiko, umgaqo-nkqubo woluntu, idiplomacy, ukubhala. Ingqiqo yakho yokulinganisela kunye nentembeko ephakamileyo yenza ukuba ufunwa emva kweqabane kumashishini. Ukuba nomnxeba kwiindawo ezenza ukuba ube ngumceli-nzulu, kwaye ukhuthaza abanye ukuba bancede unyuke kwinqanaba lempumelelo.
IMidla e Scorpio
Unako ukuhamba ngokukodwa kwintsimi enye, kwaye ube ngumphandi oyingcali, ungashiyi ilitye liguqulwe. Ingqondo yakho engenayo ihlonishwa kwaye isatshiswa ngabalingane. Ugqwesa kwiimeko ezinjengeengqondo zengqondo, uphando lolwaphulo-mthetho, i-hypnosis, ubugcisa obubugcisa, i-social science. Unqwenela ukuba nexesha elide usebenze ngasese ngaphandle kokuphazanyiswa. Unokwenza uphawu lwakho ngokuguqula inkunkuma ibe yinto evuselelekayo. Ukhanyisa ukukhanya emthunzini, kwaye unyuke kwindawo emnyama, eyimimandla yengqondo. Oku kunokukhokelela kumsebenzi wokuphulukisa amandla, unyango lwezesondo (Tantra) okanye ukubuyiswa komphefumlo. Ukulungele ukuphawula iinjongo ezifihlakeleyo, kwaye oku kukusebenza kuyo nayiphi na into. Uyakwazi ukufumana i-metamorphosis amaxesha amaninzi, mhlawumbi utshintshe imisebenzi.
Ukhululekile kwaye uvulekele kwiinkalo zoluleko. Ulungele ukwabelana ngezinto owaziyo nabanye, ngokufundisa, ukucebisa okanye njengombuzo wokukhusela ngokomoya kunye nekhokelo. Wena ungumfundi ongunaphakade, kwaye uphumelele emsebenzini wobomi ovumela ukuba uphando, uphando, uphonononge, ufilosofize kwaye uqhagamshelane namachaphaza. Ezinye iinkalo ezinjalo ziyimfundo ephakamileyo, abefundisi, udaba lweendaba, iilwimi, ukubhala, ukufotowa, ukukhenketwa kweefilimu kunye nendawo yokuzonwabisa. Ukuhamba kuvula amathuba amasha, njengoko ukhula kwiimpembelelo zenkcubeko, imibono nobulumko.
Ufanelekile ukunyuka kweentaba zakho, kwaye unentlungu ekhethekileyo ukuze ufikelele kwiinjongo zakho. Abo baphethe iitshati zehlabathi bahlala kwiindawo ezifana nokulima, i-real estate, ishishini lokuvelisa ukutya, i-horticulture.
Le yimihlaba enqwenelekayo yeMidla, kunye neyona nto leyo ekugxininisa ukuzinza, ukwakhiwa kwengcebo kunye nokunyaniseka kwamanyathelo okuphumelela. Uluntu lwakho loluntu lukhulu kwaye luzimisele, kwaye oku kukuthobela. Usebenzisa ixesha lakho kunye nezixhobo, kwaye uyazi indlela yokufumana inkxaso kwabanye.
Inkumbulo kwi- Aquarius
Uzisa isimo sengqondo esingafanelekanga kwimisebenzi yobomi bakho, kwaye uthande uvuyo, ubuhle kunye nokuqala. Ukulungele ukulandela ingcamango yengqondo kwiintsikelelo zayo, nokuba oko kuthetha ukunqanda isiko kwaye ubizwa ngokuba ngumvukeli entsimini yakho. Kunokwenzeka, uya kwenza ukuphazamiseka okukhawuleza okukufumanisa ukuba uyayiqaphela. Unomngeni ngemida kunye nesayensi ye-cosmic, kwaye unokwenziwa kwi-astronomy, inkwenkwezi, inzululwazi yesayensi, ubunjineli.
Kodwa unokwenzeka ukuba ugibele imilambo yeendlela, ngefashoni, ukuyila, ubugcisa bokuhlola kunye nomculo. Unokwenza umqondiso wakho ube ngumgqugquzeli weenguqu zentlalo, ngokukodwa izinto ezibangela ukuba ukholelwe ukuba luya kuba ngumntu ongcono. Unokufumana umdla okhethekileyo kwingcamango yobomi obungaphezulu komhlaba, kwaye uwuphishekele njengenxalenye yesigqibo sakho sokuhamba ngaphaya kwemiqathango eqhelekileyo yengcamango.
Ukhanye kwiindawo apho unako ukugebha khona emanzini aphantsi. I-Mid-heaven enokudala, eyenza ukuba ube ngumculi, umenzi, umphilisa, umhlobo kwiintsana kunye nezilwanyana, kwaye usebenzise intuition yakho njengesixhobo. Amandla akho ububele bakho, kodwa kwakhona kunokukugcina ukuba ungabanga ukuba unako ukufumana amandla akho. Isipho sakho siyilo imiyalezo ehlangeneyo, ngoma ingoma, ibali, ukukhulisana, iimfundiso zokomoya, kunye nokuba nguwe onguye.
Unokutsalwa ukuba usebenze okanye usekufuphi kwamanzi, kwaye unokukwazi ukudibanisa kwiintlobo ezingekho ngezwi zokunxibelelana (izilwanyana, ubomi baselwandle, imimoya yendalo, izinto ezisemgangathweni, izidalwa ezidibeneyo). Iipisces zilawula iinyawo, kwaye oku kungakhokelela ekubeni ngumsebenzi we-reflexologist, i-podiatrist okanye umntu othanda ukunika / ukufumana ukunyakaza kwamanyathelo!
Gcina unomdla kumsebenzi wakho, nangona uthobekile; iyinqobo ngokwenene ekutshintshweni kwexesha. (ukusuka kwi-Desiderata ngumlobi waseMelika uMax Ehrmann).
Iimpawu eziphakamayo: Ukunyuka komhlaza
2006 I-Subaru Forester XT Test Drive
Indlela yokubhala i-Essay Admission Essay
Incwadi yeBusiness Ukubhala: Ukubeka imiyalelo
I-Otariidae yooNtsapho: Iziganeko zeMpawu zoLwandle kunye neeNyana zoLwandle
Indlela Yokunceda I-Hybrid Yakho Ukubetha Ubusika Bamaxesha Ebusika